सुनसान सौराहा, वर्षातका कारण पर्यटकको संख्या घट्यो
चितवनको पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा वर्षातपछि पर्यटक घटेका छन् । विगतको वर्षातको समय भन्दा यसवर्ष पर्यटक घटेको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् । राप्ती नदी किनारमा रहेका रेस्टुरेन्ट सुनसान भएका छन् । यो स...
गैरजिम्मेवार ठेकेदार : पुल अलपत्र, भर डुंगाको
लालबकैया नदीको टिकुलिया घाटमा पक्की पुल निर्माण अलपत्र छ। पुल नबनेकाले रौतहटका गौर र इशनाथ नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दा जोखिम मोलेर यात्रा गर्छन्। इशनाथका चार वडासँग बाढीका बेला केही दिन सम्पर्कसमेत ट...
बदलिदो संसारमा आइ. टीको आगमनसँगै सबै क्षेत्रको पुनर्जीवन हुदै गएको छ । स्मार्ट बन्ने र बनाउने आइटीले वास्तवमै अहिले पुराना तथा अति जटिल पद्दतिलाई परिमार्जन गर्दै लगेको छ। वर्तमान समयमा आइटीसँग साक्षात...
काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख समान्त गोयलले भेटघाट गरेको भन्ने समाचार प्रति पूर्वराजाका सचिव डा. फणिन्द्रराज पाठकले आपत्ती जनाएका छन । रअ प्रमुख गोयलले ...
एक वर्षसम्म अपराधी पत्ता नलाग्नु लज्जास्पद: पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले निर्मला पन्तका बलात्कारी हत्यारा पत्ता नलाग्नु लज्जास्पद भएको बताएका छन । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको गत साउन १० गते बलात्कार पछि हत्या...
‘गोल्डन शावर’ विवाद : सद्गुरु बने सोसियल मिडियामा ट्रोल
एजेन्सी । आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव उर्फ सद्गुरु आफ्नै ट्वीटका कारण सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनिरहेका छन् ।एथ्लेट्स हिमा दासले पछिल्लो महिना मात्रै पाँच वटा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन् । गोल्डन गर्ल दा...
दुरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्षमा खनाल नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दुरसंञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुरुषोत्तम खनाललाई नियूक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बा...
सडक अबरुद्ध भएपछि हेलिकोप्टर मार्फत खाद्यान्न ढुवानी
काठमाडौं । अविरल वर्षा सँगै आएको पहिरोले सडक बगाउँदा उदयपुरमा हेलिकोप्टर मार्फत खाद्यान्न ढुवानी गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारले उदयपुरको लिम्चुङबुङ र ताप्ली गाउँपालिकामा हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर...
छुरा प्रहार गरि एककाे हत्या , नौं जना पक्राउ
झापा । छुरा प्रहार गरि हत्या गरेको अभियोगमा नौं जना पक्राउ परेका छन । दमक नगरपालिका-२ बस्ने१८ वर्षीय बिक्रम लिम्बुको छुरा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा सोही नगरपालिका-३ बस्ने कुशल मगर लगायत ९ जनालाई...
ओढारमा लुकाइरहेको अवस्थामा १६ किलो सुन बरामद
गोर्खा । ओढारमा लुकाईरहेको अवस्थामा गोर्खामा ११ किलो सुन फेला परेको छ । धार्चे गाउँपालिका खोर्लाबेसीमा ओडारमा लुकाएर राखेको १६ किलो सुन बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ । मनास्लु पदमार्ग नजिकै ओडारभित...
‘सी अफ जापान’मा उत्तर कोरियाले गर्यो दुई वटा मिसाइल प्रक्षेपण
एजेन्सी । बिहिबार एकाबिहानै उत्तर कोरियाको राजधानी सिउलदेखि ४३० किमीको दूरीमा रहेको सी अफ जापान(पूर्वी समुन्द्र)मा मिसाइल प्रक्षेपण गरेको समाचारले कोरिया-जापान आतंकित भएको छ । दक्षिण कोरियाका ज्वाइन...
कमरेड कर्माचार्यको घरबाट मैले जनयुद्धको थालनी गरें: अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धबारे अनौंठो रहस्य सार्वजनिक गरेका छन । बिहिबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको छैंट...
कम्युनिष्टसँग मुकाविला गर्ने कुनै शक्ति छैन: नेता नेपाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ट नेता माधव कुमार नेपालले कम्युनिष्ट पार्टी एकताको काम अघि बढिरहेको बताएका छन ।उनले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै पार्टी अघि बढिरहेको बता...
काठमाडौं । महिलामाथि श्रृखलाबद्ध काँटी आक्रमण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सन्तोष कार्कीलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । गत असर १२ गते महिलामाथि अपमाजनक व्यवहार गरेको आरोपमा समा...
नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै !
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको बैठक बस्दैछ । बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एक बजेपछि बस्ने भएको हो । बैठकमा पार्टीका विभिन्न विभागको नेतृत्व टुंग्याउने नेकपाक...